कुमारित्वको प्रश्न ? जहाँ सुहागरातको दिन सेतो च्यादर ओछ्याइन्छ किन ?… – Patrika Nepal
हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाले ‘भर्जिनिटी’ अर्थात कुमारित्वलाई विशेष रुपले महिलाको चरित्रसँग जोडेर उनको लागि राम्रो चरित्रको मापदण्ड निर्धारण गरिदिएको छ । जबकि समाजमा कुमारित्वको परिभाषा यो भन्दा ठीक उल्टो छ ।खासगरी समाज र शास्त्र अनुसार यसको अर्थ हुन्छ, कुमारित्व हुनु भनेको तपाईं पूर्णत शुद्ध हुनुहुन्छ । यसमा कुनैपनि कुराको शुद्धताको कुरा गरिएको छैन ।
केवल युवतीको शुद्धताको कुरा गरिएको छ । युवतीको कुमारित्वलाई नै उनको शुद्धताको पहिचानसँग जोडिएको छ । पुरुषको शुद्धताको कुरा कहीँ गरिएको छैन ।
छिमेकी मुलुक भारतको कतिपय स्थानमा अहिले पनि विवाहअघि युवतीको कुमारित्वको प्रसंगलाई महत्वका साथ उठाइन्छ । त्यहाँ कुमारित्व परीक्षणको नाममा सुहागरातको दिन सेतो च्यादर ओछ्याउने गरिन्छ । विवाहअघि इच्छा वा अनिच्छाले कसैसँग शा-रीरिक स-म्बन्ध बनाउन पुगेका कति महिलाहरुको जीवन नर्कमा फसेको होलान् ?
कुमारी कन्यलाई देवी मान्ने हाम्रो संस्कारले पनि यसमा विरोधाभास स्थिति ल्याएको छ । त्यसैगरी शास्त्र, पुराण, महाभारत जस्ता ग्रन्थहरुले समेत विवाहित वा शा-रीरिक स-म्बन्ध बनाइसकेका महिलालाई ‘पवित्र’ मान्दैन -स्विकार गर्दैन । मनुस्मृतिमा त स्पष्ट भनिएको छ–
Prevविवाहको दिन जन्ती लिएर बेहुला आएनन्, बेहुलीनै बेहुलाको घरमा पुगेपछि …
Nextपाथीभरामा तीर्थयात्रीले चढाएको ८ करोड बढी बैंक मौज्दात